MODA | Article Detail | ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးထီးများ
အများအားဖြင့် ထီးဆိုတဲ့အရာကို နေပူ မိုးရွာ ရာသီဥတုဒဏ်ကကာကွယ်ဖို့သက်သက်သာ အသုံးပြုကြတာမှန်ပေမယ့် တချို့သော လူတန်းစားတစ်ရပ်အတွက်တော့ ထီးဆိုတာ သာမာန်လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပိုတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ အခုလို Luxury Brand တွေက ထုတ်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးထီးတွေဟာလည်း ဈေးကွက်မှာ နေရာတစ်ခုရရှိခဲ့သလို အရည်အသွေးနဲ့ ဈေးနှူန်းတွေကလည်း သူ့ရဲ့အားထုတ်မှူနဲ့ ဆန်းသစ်မှူတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားကြပါတယ်။ အဲဒီလို အရည်အသွေးမြင့်တန်ဖိုးကြီးထီးတွေထဲကမှ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးနဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့ ထီး (၆)မျိုးကို ရွေးချယ်စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ထီးခဏခဏပျောက်တတ်တဲ့ ကိုယ်တွေလိုလူတွေနဲ့တော့ အဆင်ပြေမယ်မထင်ပါဘူး။
6. Pasotti Italian Umbrella with Swarovski Crystals
အီတလီနိုင်ငံထုတ် Pasotti ရဲ့ Swarovski Crystals ထီးတစ်ချောင်းဟာ တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၆၀ (မြန်မာငွေ ငါးသိန်းနီးပါး) ရှိပါတယ်။ Pasotti ရဲ့ ထီးတွေဟာ Luxury တန်းဝင်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမှ ထီးအရွက်နဲ့ လက်ကိုင်တွေအပေါ်မှာ Swarovski Crystal တွေပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် ဒီလောက်ဈေးမျိုးရှိတာဟာ အံ့သြစရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထီးတစ်ချောင်းလုံးနီးပါးက Handmade ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျား၊မ မရွေး ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဒီဇိုင်းမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။
5.Il Marchesato" Pure Silk and Swarovski Crystal Umbrella
တန်ဖိုးမြင့် ဖက်ရှင်ထုတ်ကုန်တွေ အများဆုံးထွက်ရှိရာ အီတလီနိုင်ငံကပဲ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ Il Marchesato ရဲ့ ပိုးသားထီးလေးတွေဟာလည်း တန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၈၅ ( မြန်မာငွေ ငါးသိန်းကျော်ခန့်) ရှိပါတယ်။ ထီးတစ်ချောင်းလုံးက Handmade ဖြစ်တဲ့အပြင် လှပတဲ့ ပိုးသားထီးရွက်ပေါ်မှာ Swarovski Crystal တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားပြီး လှပအနုပညာမြောက်တဲ့ ထီးလက်ကိုင်ဒီဇိုင်းလေးကိုပါ Swarovski Crystal တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
4. SwaineAdeney Brigg Men’s “Whangee”
Swaine Adeney Brigg ထီးတစ်ချောင်းရဲ့တန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ ၇၆၀ (မြန်မာငွေ ဆယ်သိန်းနီးပါး ) တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ လန်ဒန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Swaine Sdeney Brigg ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီထီးရဲ့ ထီးရွက်ကို ပိုးသား သို့မဟုတ် နိုင်လွန်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်ကတော့ စံချိန်မီရွေးထုတ်ထားတဲ့ “ဝါး”ကို လက်ကိုင်အနေနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့အပြင် အဲဒီဝါးကို ဒီဇိုင်းပုံဖော်ဖို့အတွက် သဘာဝနဲ့နည်းပညာ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတာလို့သိရပါတယ်။
3 Burberry NubuckOstrick Handle Umbrella
ဗြိတိန် Luxury Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Burberry အမှတ်တံဆိပ် ကထုတ်တဲ့ ဒီထီးကောက်ကတော့ ဒေါ်လာ ၈၅၀ (မြန်မာငွေ ဆယ့်တစ်သိန်းကျော်) တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကထုတ်တဲ့ ထီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့အပြင် လှပပြီးဆွဲဆောင်မှူရှိလွန်းတဲ့ဒီဇိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ထီးတစ်လက်မို့ ဒီဈေးနှုန်းရှိတာက အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆန်းနေတဲ့အချက်ကတော့ သူ့ရဲ့လက်ကိုင်နဲ့ နှိပ်ကြယ်သီးကို ငှက်ကုလားအုတ်ရဲ့ အရေပြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။
2. Swaine Adeney Brigg Men Malacca Umbrella
ဒေါ်လာ ၁၂၇၀ (မြန်မာငွေ ၁၇ သိန်းနီးပါး ) တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီ Luxury ထီးကိုတော့ Swaine Adeney Brigg အမှတ်တံဆိပ်ကပဲ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ ထီးလက်ကိုင်မှာ လျှို့ဝှက်အရက်ဗူးလေးထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားတာပါပဲ (ခွက်ပုန်းသမားတွေနဲ့တော့ အံကိုက်ပေါ)့ ။ဒါ့အပြင် ဒီထီးရဲ့ အရွက်ကို ပိုးသားစစ်စစ်နဲ့ယက်လုပ်ထားပြီး ထီးရိုးကို တျူးလစ်ပင်ရဲ့အသားနဲ့ ငွေထည်တို့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
1.Billionaire couture Umbrella
ဘီလျံနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဒီထီးရဲ့ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာငါးသောင်း (မြန်မာငွေ သိန်းခြောက်ရာ့ငါးဆယ်ကျော်) ဖြစ်ပါတယ်။ Angelo Galasso အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီထီးကို မိကျောင်းသားရေစစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး သူ့ရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အာမခံချက်အပြည့်အဝပေးထားသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြားထဲမှာ ဒီထီးကြီးထုတ်ဆောင်းလိုက်တာနဲ့ ဝိုးကနဲ ဝါးကနဲ ကြွေကျလောက်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ လုံးဝငြင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကမ္ဘာကြီးကို လှပစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ အနာဂတ်ကို ခြယ်မှုန်းနေတဲ့ People Tree
Publishing နဲ့ Advertising လောကမှာ ကျင်လည်နေတဲ့ ဗြိတန်သူလေး Minney က Social & Environmental Issue တွေကို ဒီကြားခံနယ်ကတစ်ဆင့် Awareness ပေးဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Fashion ကျတဲ့ Fair Trade Product တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထဲက စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘာလီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သုံးလကြာ တစ်ကိုယ်တော် Backpacking ထွက်အပြီးမှာတော့ ဒီအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ကမ္ဘာပထမဆုံး Sustainable Fashion ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ နှစ်လေးတစ်နှစ်ပါ။ Safia Minney က Sustainable Living ဆိုတာကို လူနည်းစုလောက်သာသိတဲ့အချိန် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိူမြို့မှာ People Tree ဆိုတဲ့ Company ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက လယ်သမားတွေ၊ အထည်ချူပ်အလုပ်သမားတွေ၊ လက်မှုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ Enviromentaly Friendly ဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ထုတ်လုပ်နေခဲ့တာပါ။
Fair Trade Fashion Has Arrived
1995 ခုနှစ်မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲ Fair Trade & Sustainable Clothing ကို စတင်အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခဲမှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုနဲ့အတူ သုံးနှစ်အကြာမှာတော့ People Tree ရဲ့ ပထမဦးဆုံးဆိုင်ကို Fashion အမိုက်စားတွေ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ တိုကျိူက Jiyugaoka နားမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သဘာဝပစ္စည်းတွေ၊ လက်မှုပညာတွေနဲ့အတူ မျှတတဲ့လုပ်အားခ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ Environmental Best Practice နဲ့ ကျားမညီမျှမှုတွေ ကျင့်သုံးတဲ့ People Tree က Fashion လောကအတွက် ကောင်းခြင်းအင်္ဂါရပ်တွေသယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ The Soil Association က ပေးတဲ့ Global Organic Textile Standard Certificate ကို ရရှိပြီး အကျိူးဆက်အနေနဲ့ Fair Trade Product Label ကိုရရှိခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး Fashion Company တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားတွေထိပါ ရောင်းချဖို့အတွက် London မှာ People Tree Ltd ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Customer တွေ ပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Design ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး British Designer တွေနဲ့ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် British Magazine တစ်ခုမှာ နာမည်ကြီး မင်းသမီး Sienna Miller ကို People Tree နဲ့ မြင်တွေ့ရအပြီးမှာတော့ London မှာပါ နာမည်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Vogue ရဲ့ Japanese Edition မှာလည်း People Tree နဲ့ Fair Trade အကြောင်းကို Feature လုပ်ခံရကာ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေခဲ့တာပါ။ Harry Porter စတား Emma Watson နဲ့လည်း Love Emma Collection ဆိုပြီး ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပြတိုက် Victoria & Albert Museum နဲ့ပူးပေါင်းပြီး V&A Collection ဆိုတဲ့ အခမ်းနားဆုံးလက်ရာတွေဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ Tulip and Seed ဆိုပြီး နှစ်မျိူးရှိပြီး ဒီ Collection က 1930 လောက်တုန်းက Calico Printers Association ကနေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Dress Fabrics တွေကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Collection အတွက် ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုအပိုင်းကို အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ Creative Handicraft မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ Creative Handicraft ဆိုတာက မွန်ဘိုင်းမြို့က ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့ အမျိူးသမီးတွေကို အသက်မွေးကျောင်းပညာရပ်တစ်ခုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
100 % Organic Cotton နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Denim Jean တွေကို 2018 မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန် Denim ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ ရေပမာဏ 87.2 % ကို လျော့ချပြီး ပြုလုပ်ထားတာပါ။ High Street Market မှာ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ Eco Friendly Jean ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းပြီး နေ့စဉ်ဘဝမှာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အထာကျမယ့်ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
BBC Earth နဲ့အတူ Our Blue Planet ဆိုတဲ့ Collection ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Collection မှာတော့ ရှားပါးမျိုးစိတ်တွေနဲ့ နေထိုင်ကျက်စားရာနေရာတွေ ပျောက်ကွယ်လာတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံတွေ၊ Cheetah ကျားသစ်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ကမ္ဘာကြီးကို လှပစေချင်တဲ့ စိတ်သဘောထားတွေနဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့အနာဂတ်ကို ခြယ်မှုန်းနေတာက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလား။
ထွက်ခဲ့သမျှ Collection တွေထဲမှာ အလန်းဆုံးလို့တောင်ဆိုရမလားပဲ
ကာတွန်းကမ္ဘာထဲရောက်သွားဖို့နဲ့ ကာတွန်းကမ္ဘာထဲကဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ငယ်ငယ်တည်းက စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကမ္ဘာကျော် Luxury အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fendi ရဲ့ အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Collection အသစ်က အထူးအခွင့်အရေးကောင်းကြီးဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
Visual Artistတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Joshua Vides နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး Prefall 2020 Collection အနေနဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Fendi ရဲ့ California Sky Collection က အရောင်အားဖြင့် အဖြူနဲ့အနက်ကိုအခြေခံပြီး ကာတွန်း Sketch ဆန်ဆန် Clothing တွေနဲ့ Accessories များစွာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Fendi ရဲ့ Creative Director တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Silvia Venturini Fendi နဲ့ Joshua Vides တို့အတူ ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒီ Collectionမှာ ကျား၀တ်၊မ၀တ် ၊ ကလေး၀တ်နဲ့ Ready to wear တွေအပြင် ၊Sneaker တွေ ၊Windbreaker တွေနဲ့ မျက်မှန်၊အိတ်၊ ဦးထုပ်လို Accessoriesတွေအထိပါ ရွေးချယ်စရာ အများကြီးထွက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပြီး ဈေးကတော့ Luxury Product တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အမြင့်စားပါပဲ။
အခု ‌လတ်တလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မန္တလေးက 2D cafe ဆိုင်လေးကို ဒီအ၀တ်အစားတွေနဲ့သာ သွားလိုက်ရရင်တော့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာတွန်းကမ္ဘာထဲက ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးတစ်ယောက်လိုမျိုး ခံစားမှူအပြည့်နဲ့ ရေနဲ့ကြာအရမ်းကိုပဏ္ဍာသင့်နေတော့မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲနော်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Ready-to-Wear မြန်မာဝတ်စုံတွေကို ဘယ်မှာ ဝယ်ယူကြမလဲ
နန်းဆန်တာလေးက ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပို ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်
မမတို့၊ ညီမလေးတို့ရေ..မိုးရာသီရောက်နေပေမယ့် မကြာခင်မှာ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေပြန်ဖွင့်တော့မယ်။ နောက်ပိုင်း ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင် အလှူ၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေနဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကလာတော့မယ်နော်။ တက္ကသိုလ်တွေလည်း ပြန်ဖွင့်တော့မှာဆိုတော့ အခုချိန်မှ အစဝယ်ဦး၊ အပ်ချုပ်ဆိုင်သွားဦး ဆိုရင် အချိန်လည်း ကုန်တယ်၊ စောင့်ရတာလည်း ကျောင်းတက်ချိန်အမှီဝတ်ရဖို့ သိပ်မသေချာဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပျိုမေတွေရော၊ မမတွေ၊ အန်တီတွေရော အသင့်ချုပ်ပြီးသား Ready-to-Wear (Ready-Made) Brand မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို ပိုပြီး ရွေးချယ်လာကြတာပေါ့။ Sizing က Fix လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် Small ကနေ XL လောက်အထိလာတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ။ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ Closet မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို ကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်တဲ့ မြန်မာဝတ်စုံကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါကြောင့် Editor ကိုယ်တိုင်သဘောကျသလို ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံ Ready-to-Wear Brand လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီ Brand တွေက သူတို့ရဲ့ Official Store တွေမှာဝယ်ယူလို့ရသလို Official Facebook Page ကနေလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။
အခုတည်း ကရှာဝယ်ထားမှ အပြင်သွားတဲ့အခါ၊ ကျောင်းတက်တဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်မှာနော်။
မြန်မာဝတ်စုံကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း SHAYi ကို မသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပဲနော်။ Designer Sann Bawk Rar ရဲ့ အမြဲ လတ်ဆတ်ပြီး Unique ဖြစ်လွန်း၊ လှလွန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေက Collection အသစ်ထွက်တိုင်း မဝယ်ရမနေနိုင်အောင်ပါပဲ။
MC/Influencer လေး Teresa ရဲ့ Khinedee ကလည်း Founder လေးလိုပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေအသည်းနှလုံးကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထသွားထလာကနေပွဲတက်ဝတ်စုံတွေအထိ ဒီဇိုင်းစုံ ရရှိနိုင်တယ်နော်။
ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေကို ကာလာစုံ Colleciton အလိုက်ရရှိနိုင်တာမို့ မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများ အကြိုက်တွေ့တဲ့ Brand လေးပါ။ Editor ဆိုရင် Noon ရဲ့ Cotton ပိတ်ဖောက်ဇာ Top လေးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေအကြိုက်တွေ့မယ့် မြန်မာဝတ်စုံ လေးတွေ Clothes Garden မှာရှိပါတယ်။ Clothes Garden ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်း အပွင့်လေးတွေကစလို့ ပြောင်ဝမ်းဆက်လေးတွေအထိ ရွေးချယ်စရာများပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် Ready-to-Wear တွေကို ရှာနေရင်တော့ MOMICHE မှာရှိပါတယ်။ ပွဲတက်လို့ရတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးတွေရှိသလို Casual ဝတ်လို့ရတဲ့ Cotton ဝမ်းဆက် ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်း ရိုးရိုးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
AKK Silk & Cotton
AKK မှာတော့ ပွဲထိုင်ချိတ်တွေ၊ ပိုးသားအစ တွေကစလို့ အသင့်ချုပ်ပြီးသားမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို အရောင်အသွေးစုံလင်အောင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသူလေးတွေကစလို့ အသက်အလတ်ပိုင်း မမတွေအထိအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
#Burmese Traditional Outfits
လှပမြတ်နိုးဖွယ် ပုလဲတို့ရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာ ဟိန်းနဒီပုလဲရတနာဆိုင်
န၀ရတ်ကိုးပါးမှာ တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ပုလဲရတနာနဲ့ပတ်သက်ရင် အမြဲသတိရနေ‌စေမယ့် နေရာလေးတစ်ခု
လူသားတို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးရာ သဘာ၀ရဲ့ အဆင်တန်ဆာတွေထဲမှာ ပုလဲဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ပုလဲဆိုတာ တွင်းထွက်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုမဟုတ်ပဲ သက်ရှိသတ္တဝါဖြစ်တဲ့ကမာတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်တည်လာတဲ့ အဖိုးတန်ရတနာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ။ဒါ့အပြင် ပုလဲကို မြန်မာလူမျိုးတို့က ရတနာကိုးပါးတွင် တစ်ပါးအပါအ၀င်အနေနဲ့လည်းအမြတ်တနိုး၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို မြန်မာတို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ ပုလဲရတနာကို လှပသောလက်ရာ ခေတ်မီသောဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖန်တီးပေးနေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကလည်း အားလုံးအတွက် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဟိန်းနဒီ ပုလဲရတနာဆိုင်ကြီးပါပဲ။ဟိန်းနဒီပုလဲရတနာဆိုင် ကို (၂၀၁၀) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာဆိုရင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း(၅)ဆိုင်တိတိကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်အမှတ်(၁) ကိုတော့(၂၀၁၀)ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဆိုင်အမှတ်(၂) ကို(၂၀၁၆)ခုနှစ်၊ဆိုင်အမှတ်(၃) ကို(၂၀၁၈)ခုနှစ်၊ဆိုင်အမှတ်(၄) ကို (၂၀၁၉)ခုနှစ် နဲ့ ဆိုင်အမှတ်(၅) ကိုတော့ (၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာ အသီးသီးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိန်းနဒီပုလဲရတနာဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာလည်း ပြိုင်စံရှားတဲ့ မြိတ်ပုလဲစစ်စစ်နဲ့ ဟောင်ကောင် SETTING(ပုလဲမှို)တွေကို စိတ်တိုင်းကျ လက်လီလက်ကား၀ယ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် ဟိန်းနဒီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်နာများထံမှာလည်း Customize ဒီဇိုင်းများ စိတ်တိုင်းကျ အပ်နှံနိုင်ပြီး ပုလဲအပေါက်ဖောက်ခြင်း ၊အရောင်တင်ခြင်းများကိုပါ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
"လှပခေတ်မီ ဟိန်းနဒီ" ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ လှပပြီးခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို Customer များ စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာမို့ မြန်မာတို့ရဲ့ အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရာ ပုလဲရတနာနဲ့ပတ်သက်ရင် လုံး၀ကိုမေ့မထားသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးသော နေရာလေးတစ်ခုအဖြစ် ဟိန်းနဒီဟာ အမြဲတည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
#Pearl & Jewelry Shop
Cele မမတို့ပြောပြတဲ့ သူတို့အကြိုက်ဆုံး Lingerie Brand များ
သူတို့ရဲ့ Bra ရွေးချယ်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှတရားကို သူတို့ရဲ့ အပေါ်ယံအဝတ်အစားတွေက ဖော်ပြပေးသလို အတွင်းက ထောက်ပံ့ ပုံဖော်ပေးတဲ့ Underwear/Lingerie Brand တွေအပေါ်လည်း အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Lingerie ရွေးချယ်တာ မတူညီကြပေမယ့် အားလုံးက သူတို့ရဲ့ Personal Taste နဲ့ကိုက်ညီပြီး ကိုယ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ Lingerie တွေကိုရွေးချယ်ကြမှာတော့ အသေချာပါပဲ။ အခုချိန်မှာ Market ထဲမှာလည်း အဆင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး၊ Concept အမျိုးမျိုးနဲ့ Lingerie Brand တွေကလည်း ရေတွက်လို့မရအောင်ရှိပါတယ်။
Brand တွေထဲမှာလည်း “Calvin Klein” ရဲ့ Cotton Bralette တွေကနေစပြီး Luxry ဖြစ်တဲ့ “La Perla” French Lace Bralette အဆုံး အမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။ Lingerie Brand တွေနဲ့ Celebrity တွေနဲ့ Collaboration လုပ်ထားတဲ့ Collection တွေ၊ ဥပမာ- Kim Kardashian ရဲ့ Skims Shapewear Collection ၊ Rihanna ရဲ့ Savage x Fenty Label တွေကလည်း Market ထဲမှာ အရမ်းလူကြိုက်များပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ Lingerie Industry မှာလည်း အရင်တုန်းက Victoria's Secret လို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရားဆိုတာတွေကို မဖော်ညွှန်းတော့ပဲ မိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားနဲ့ Sexiness ကိုပဲ အသားပေးလာကြပါတယ်။ ဝမ်းသာစရာကောင်းတာက အဲ့လို နာမည်ကျော် Brand တွေဖြစ်တဲ့ Skims တို့ Savage x Fenty တို့ကို သူတို့ရဲ့ Official Site မှာတင်မကဘဲ တခြား Online E-Commerce တွေဖြစ်တဲ့ Amazon နဲ့ Nordstorm တို့မှာလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အဲ့ထဲမှာမှ နိုင်ငံတကာက အနုပညာရှင် Celebrity မမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Kim Kardashian ၊ Kendall Jenner ၊ Chrissy Teigen ၊ Bella Hadid တို့လို A-listers တွေ အနှစ်သက်ဆုံး Lingerie Brand (၇) ခုကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ အဲ့ Brand ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ၊ အားသာချက်တွေ၊ ဘယ်သူတွေရဲ့ Favourite Brand တွေလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ လေ့လာကြည့်လိုက်တော့နော်။
Kim Kardashian ရဲ့ Inclusive Shapewear Brand ဖြစ်ပြီး အရင်နှစ်ကမှစပြီး Launch လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Underwear ထက်သာလွန်တဲ့ Bodysuits ၊ Shorts ၊ Body Tape တွေပါရရှိနိုင်တာဖြစ်ပြီး Collection တိုင်းမှာလည်း Sizing က XXS ကနေ 5XL အထိလာတာမို့ အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ဆင်ပြေပါတယ်။ Price Range အားဖြင့်လည်း $18 - $98 အတွင်းရှိပြီး Ashley Graham ၊ Selena Gomez နဲ့ Chrissy Teigen တို့ရဲ့ အသည်းစွဲ Brand ပါ။
Shop now at https://skims.com/
Spanx က Hollywood အသိုင်းအဝိုင်းမှာပါနာမည်ရှိပြီးသား Brand တစ်ခုပါ။ Stars တွေဖြစ်တဲ့ Khloé Kardashian ၊ Mindy Kaling ၊ Jenna Dewan နဲ့ Karlie Kloss တို့က Spanx ရဲ့ အမာခံ Fan တွေပါ။ အဲ့လိုကြိုက်ရတာလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ Bodysuits တွေ၊ Sculpting Short တွေအပြင် အားကစားလုပ်သူတွေအတွက် Activewear Line ကိုပါတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့ပါ။ Sportwear လို့တောင်မထင်ရစေတဲ့ Spanx Booty Boost Legging တွေကိုဆိုရင် မင်းသမီး Jennifer Garner ကအရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်တဲ့။
Shop now at https://www.spanx.com/bras
ဒီ French Lingerie Brand ကတော့ Supermodels တွေဖြစ်တဲ့ Kendall Jenner ၊ Kaia Gerber ၊ Joan Smalls နဲ့ Taylor Hill တို့ရဲ့ All-Time Favourite Brand ပါ။ သူ့ရဲ့ Lingerie၊ Bodysuit နဲ့ One-Piece Swimsuit တွေက Lace တွေ၊ Delicate ဖြစ်တဲ့ Print တွေ Pattern တွေများတော့ အတွင်းခံလိုမဟုတ်ပဲ အပေါ်က Blazer တွေ၊ Denim Jacket တွေနဲ့ဝတ်ရင်တောင် အထာကျနေပါပြီ။ Khloé Kardashian ဆိုရင်လည်း Gooseberry ရဲ့ Bodysuit တွေကို နှစ်အတော်ကြာထဲက စွဲစွဲမြဲမြဲ ဝတ်ခဲ့တာပါတဲ့။
Shop now at https://gooseberryintimates.com/
သင်က Elegant ဖြစ်တဲ့ Classic ဖြစ်တဲ့ Lingerie ကိုမှ နှစ်သက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီ Italian Brand ကသင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ Kourtney Kardashian ၊ Priyanka Chopra နဲ့ Kendall Jenner တို့ကိုလည်း Paparazzi တွေရဲ့ပုံတွေမှာ La Perla Lingerie တွေနဲ့ Outfit တွေတွဲဝတ်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ La Perla က Luxry Langerie Brand ဆိုတဲ့အတိုင်း သူရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ကျန်တဲ့ Brand တွေထက်တော်တော်များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Luxry ကိုမှကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ တကယ့် Exclusive Feeling ကိုပေးပါတယ်။
Shop now at https://www.laperla.com/
Rihanna ရဲ့ Savage x Fenty ကတော့ Playful ဖြစ်တယ်။ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ပါးလွှာပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်လွန်းတဲ့ Lingerie Line တစ်ခုဆိုပြီး ရေပန်းစားပါတယ်။ Cara Delevigne ၊ Bella Hadid နဲ့ Gigi Hadid တို့က Savage x Fenty ရဲ့ First-ever Ambassador တွေဖြစ်ပြီး အဆိုတော် Normandi ကလည်း Savage x Fenty ရဲ့ Runway Show တိုင်းမှာ ပါဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ RiRi ရဲ့ Taste အတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေမို့ ဘယ်သူမှ မကြိုက်ပဲမနေနိုင်ပါဘူး။
Shop now at https://www.savagex.com/
Clavin Klein ကတော့ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Calvin Klein Underwear တွေကို Supermodel တွေ၊ Professional အားကစားသမားတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဝတ်ဆင်လာခဲ့ကြသလို Kardashian-Jenner Family နဲ့ Justin Bieber တို့ဇနီးမောင်နှံအဆုံး #MYCALVINS Campaign မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူရဲ့ Underwear တွေက Monochrome နဲ့ Basic- Everyday Wear ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ Signature Calvin Klein Logo Waistband ကြောင့်ကို အချိန်တိုင်း Hot ဖြစ်နေတာပါ။
Shop now at https://www.calvinklein.us/en/womens-clothing/underwear-womens/women-panties
Stylish Icon တွေဖြစ်တဲ့ Victoria Beckham ၊ Dakota Johnson ၊ Gigi Hadid နဲ့ Bella Hadid တို့ကို Fleur Du Mal က Bra ၊ Bodysuit ၊ Pajamas တွေနဲ့ တော်တော်များများမြင်တွေ့ရမှာပါ။ New York City-Based Langerie Brand ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အရမ်းလှတဲ့ Lace Bra တွေနဲ့ Silk Lingerie တွေကလူကြိုက်များပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ Lingerie Wear အပြင် Swimwear နဲ့ Ready-to-Wear Line တွေလည်းရှိပါတယ်။ Style နဲ့ Design အပေါ်မူတည်ပြီး $32 - $350 အထိရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ပေးရတာနဲ့တန်အောင် သုံးထားတဲ့ Fabric နဲ့ အရည်အသွေးက အရမ်းကောင်းပါတယ်။
Shop now at https://www.fleurdumal.com/
အမျိုးသားတွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Brand များ
‌အမျိုးသားအတော်များများကတော့ ဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတွေမှာ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် ယောက်ျားလေးအများစုဟာ အထူးတလည်‌အလေးထားခဲ့ကြတာမျိုးမရှိပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဖက်ရှင်သာမက အမှတ်တံဆိပ်တွေပေါ်မှာပါ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုမှ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် မိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီးချေးများတတ်လာကြသလို ပိုပြီးအစွဲကြီးတတ်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ယောက်ျားလေးအများစု နှစ်သက်မက်မောစွာ၀တ်ဆင်တတ်ကြတဲ့ ရွေးချယ်မှူအများဆုံး ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကမှ ဘယ်လိုအမှတ်တံဆိပ်တွေကများပုရိသတွေရဲ့ရင်ကိုထိမှန်စေသလဲ။ မိန်းကလေးတွေလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးကိုလက်ဆောင်၀ယ်ပေးတဲ့အခါလွယ်ကူစေဖို့နဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ အခက်မတွေ့စေဖို့အတွက် အမျိုးသားတွေအကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကငါးခုကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Tommy Hilfiger ကိုတရား၀င်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာ 1985 ၀န်းကျင်လောက်ကမို့ အရမ်းကြီးကြာပြီလို့တော့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 90 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း သူတို့ရဲ့ အရှိန်အဝါဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာခဲ့ပြီး ယောက်ျားလေး၀တ် အ၀တ်အစားတွေကို အဓိကထားထုတ်လုပ်တဲ့ Brand တစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ Hoddie , ဦးထုတ်နဲ့ Polo Shirt တွေကစလို့ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Tommy Hilfiger ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ နှစ်တွေ ,Fashion trend တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း သူ့ရဲ့ Outfit Design က လုံး၀ ရိုးအီမသွားနိုင်တဲ့အချက်ပါ။
Nike လို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း များစွာသော Customer တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ Brand က တော်တော်ရှားမှာပါ။ Nike ဟာ သူ့ရဲ့ Sport Wear နဲ့ Regular Wear ကြားမှာ လူတိုင်း၀တ်ဆင်နိုင်မယ့် အနေအထားတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး Gym သွားဖို့ကစလို့ အလုပ်သွား၊အပြင်သွား ၀တ်ဆင်လို့ရမယ့်အထိ အခြေအနေအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီမယ့် outfit style မျိုးတွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးလူငယ် အရွယ်အားလုံးသဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့ brand တစ်ခုလည်းဖြစ်သလို သူရဲ့ Tshirt , Jogger pant , Hoddie နဲ့ Sneaker တွေကလည်း အားလုံးရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်နေရတာပါ။
Levi's ကတော့ Denim Jean တွေရဲ့ ဘုရင်လို့တောင်ပြောလို့ရအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ Denim ဂျာကင်နဲ့ ဘောင်းဘီတွေဟာ ၀တ်ဆင်ဖူးသူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေးရသလောက်ကိုတန်တဲ့ brand တစ်ခု ရယ်လို့လည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Style လည်းကျ ၊ သက်တောင့်သက်သာလည်းရှိတဲ့အပြင် အချိန်အကြာကြီးခံတဲ့ Brand မျိုးကိုမှရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ Levi's ကအရွေးချယ်သင့်ဆုံးပဲလို့ဆိုရမှာပါ။ နောက်ပြီး ရွေးချယ်စရာ ဒီဇိုင်းလည်းစုံလင်သလို size မျိုးစုံလည်းအလွယ်တကူရနိုင်တာကြောင့် Jean ခရေဇီ အမျိုးသားတွေရဲ့ တမ်းတမ်းစွဲ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ယနေ့တိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။
ယောက်ျားလေးအများစုဟာ အားကစားလုပ်ရတာကို နှစ်သက်ကြတဲ့အတွက် Sport Wear Fashion Brand တွေဟာလည်း အမျိုးသားတွေကြားမှာ အရမ်းကိုရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ရွေးချယ်စရာ sport wear brand တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုပြပါဆိုရင် Under Armour ကိုလည်းချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ထိပ်တန်း အားကစားအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲမှာ ဈေးနှူန်းသင့်တင့်ပြီး အရည်အသွေးလည်းကောင်းလွန်းတာမို့ လူကြိုက်အရမ်းများတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ Casual Style ကစလို့ Sport type တွေအထိရွေးချယ်စရာမျိုးစုံတာကလည်း သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုတော့ မသိတဲ့သူလည်းတော်တော်ရှားသလို အများစုမှာ Adidas ပစ္စည်းအနည်းဆုံးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ဖူးကြမှာပါ။ သူရဲ့ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အရည်အသွေးကြောင့် Adidas ဟာ ယောက်ျားလေးအများစုရဲ့ မရှိမဖြစ် ရွေးချယ်မှူတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အားကစား၀တ်စုံကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်တဲ့ Brand တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ၀တ်ဆင်ရတဲ့ quality နဲ့ ၀ယ်ရတာတန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှူတို့ကြောင့် အားကစားသမားတွေနဲ့ လူကြီးလူငယ် အလွှာစုံကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ Brand တစ်ခုအဖြစ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်တည်နေခဲ့တာပါ။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုတော့ ဈေးနှုန်းအတန်အသင့်များပြီး ကွာလတီကောင်းတဲ့ Polo Shirt တွေကို သဘောကျနှစ်သက်သူတိုင်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ 1967 ပတ်၀န်းကျင်လောက်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် အ၀တ်အစားနဲ့ lifestyle brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကတော့ သူရဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့် Upper-middle class လောက်ကိုပဲရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ထင်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းက ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရည်အသွေးကိုရနိုင်တာမို့ အမျိုးသားအတော်များများရဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုရမာပါ။ သူရဲ့ အဓိက signature ဖြစ်တဲ့ Polo Shirt တွေနဲ့ ထင်ရှားလာခဲ့တဲ့ Ralph Laurenဟာ အလယ်အလတ်တန်းစားကနေ Luxury အထိ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Calvin Klein ကတော့ သူ့ရဲ့အရမ်းမိုက်တဲ့ Underwearတွေနဲ့ နာမည်ရလာခဲ့တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀မှာ Underwear ဆိုတာဟာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ စတိုင်လ်လည်းကျ သက်တောင့်သက်သာလည်းဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတာမျိုးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ CK က အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှူပါပဲ။ Underwear ကစလို့ Shirt၊ T-shirt ၊ဘောင်းဘီ ၊ Jacket တွေအထိထုတ်လုပ်တဲ့အပြင် တန်ဖိုးလည်းမြင့်မားသလို အရည်အသွေးလည်းကောင်းလွန်းတာကြောင့် နာမည်ကျော်လူကြိုက်များတဲ့ အမေရိကန် Luxury clothing brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Calvin Klein ဟာ 1968 ခုနှစ်ကစလို့ ယနေ့ထိတိုင် အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနှစ်သက်တဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ရွေးချယ်မှူအဖြစ် အလွှာတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Gucci ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတော့ Luxury Brand တွေကိုမှ နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတိုင်း မသိသူမရှိလောက်ပါဘူး။ 1921 ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အီတလီအခြေစိုက် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gucci ဟာ တန်ဖိုးကြီး Clothing Brand တွေရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်သရေရှိရှိနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ Ready to wear တွေကစလို့ အိတ်၊ ဖိနပ်နဲ့ ခါးပတ်လို accessories တွေအထိ uniqueဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေ နဲ့ မြင့်မားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတွေ ကြောင့်လည်း Hi-so အမျိုးသားအလွှာတွေရဲ့ ကြားမှာ မပါမဖြစ် ရွေးချယ်ကြတဲ့ Clothing Brand တစ်ခုအနေနဲ့ တည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိ ပြင်သစ်ရဲ့ Multinational Company ဖြစ်တဲ့ Kering ရဲ့လက်အောက်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Balenciaga အမှတ်တံဆိပ်ကလည်း အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူရဲ့ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့ Sneaker တွေဖြစ်ပြီး အခြားအ၀တ်အစားနဲ့ အိတ်တွေမှာလည်း နာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် တန်ဖိုးကြီးထုတ်ကုန်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုကြတဲ့ လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားအများစုရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးရွေးချယ်မှူတွေထဲမှာ မပါမဖြစ် ဖြစ်တဲ့ Balenciaga ဟာ ယခုထက်တိုင် ထိပ်တန်း Clothing Brand တွေရဲ့ စာရင်းထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။
သင်အရမ်းကြိုက်နေတဲ့ GENTLE MONSTER ဆိုတာ…
ဖက်ရှင် Industry ကြီးကိုထိုးဖောက်လာတဲ့ Eyewear Brand တစ်ခုအကြောင်း
အခုတလောဖက်ရှင်ကိုရူးသွပ်သူတွေ၊ Sunglasses တွေကိုအလွန်နှစ်ခြိုက်သူတွေ ကြားမှာ အရမ်းရေပန်းစားနေတဲ့ Brand တစ်ခုကို သတိထားမိတယ်။ နိုင်ငံခြားကိုမှာတဲ့ Online Shop တွေ၊ International Retailer တွေမှာပါ ဒီနေကာမျက်မှန်တွေကို အများအပြား Demand ဖြစ်နေကြတယ်။ ဖက်ရှင်ကျတဲ့သူတိုင်း အဲ့ Brand နဲ့ Sunglasses တော့အနည်းဆုံးတစ်ရံတော့ရှိကြတယ်။ သူကတော့ “GENTLE MONSTER” ပါ။ ဒီမှာတော့ Gentle Monster ကို K-Drama တွေနဲ့ Korean Actress တွေကနေစတင်သတိပြုမိတာဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့သုံး၊လေးနှစ်လောက်တည်းက Hollywood ကနာမည်ကျော်တွေ၊ Beyoncé၊ Hailey Bieber၊ Kaia Gerber၊ Lil Nas X နဲ့ Billie Eilish တို့ပါနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဝတ်ဆင်လာကြတဲ့ တောင်ကိုရီးယား Eyewear Brand တစ်ခုပါ။
အယ်ဒီတာကိုယ်တိုင်လည်း GENTLE MONSTER ကို နှစ်သက်သူမို့ ဒီ Brand အကြောင်းကို စူးစမ်းကြည့်မိတယ်။
GENTLE MONSTER က ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဆိုးလ်၊ တောင်ကိုရီးယားမှာ Hankook Kim ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Sunglasses and Optical Glasses Brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၈ April မှာတော့ South Korea၊ United States၊ Hong Kong၊ Singapore နဲ့ China တို့လို နိုင်ငံတကာမှာ ဆိုင်ပိုင်း ၄၀ ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော် မျက်မှန် Brand တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ သက်တမ်းအားဖြင့် ၉ နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် Style ကျပြီး On-Trend ဖြစ်နေတဲ့ GENTLE MONSTER ရဲ့အာင်မြင်မှုကတော့ တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာပါတယ်။
GENTLE MONSTER ရဲ့ တခြား Eyewear Brand တွေနဲ့ မတူညီပဲထူးခြားတဲ့အချက်က သူတို့ Brand ရဲ့ Concept နဲ့ Philosophy တွေပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Brand ဟာ မျက်မှန်တစ်လက်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ Value တွေ၊ Imagination တွေအများကြီးနဲ့ ဖော်ညွှန်းထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Collection တွေအားလုံးက ဖော်ညွှန်းချက်တွေ Concept တွေအသီးသီးရှိကြပြီး တပ်ဆင်လိုက်သူကို ဖက်ရှင်ကျစေတယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုထက်အများကြီးပိုစေပါတယ်။
Product Design အားဖြင့်ဆိုရင်လည်း Everyday Wear ကနေ Experimental ဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းတွေကိုပါ Range စုံအောင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့်ဆိုလည်း US$ 200 ကနေ US$600 ဝန်းကျင်အထိအစားစားရှိပါတယ်။ Collection တစ်ခုကို Style အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀ နဲ့ ၄၀ ကြားထုတ်လုပ်ပြီး အရောင်အားဖြင့်ကတော့ ၅ရောင်ကနေ ၁၀ရောင် Optional အဖြစ်ထွက်ရှိလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီထက်ထူးခြားတာကတော့ သူ့ရဲ့ မင်သက်စရာကောင်းလှတဲ့ Store Display တွေပါ။ GENTLE MONSTER ရဲ့ ဘယ် Store Outlet ကိုသွားသွား Store Outlet ကိုသွားတာလား Visual Architect ပြခန်းတစ်ခုကို ရောက်သွားတာလားတောင် မသဲကွဲပဲဖြစ်နေစေမယ့် Store အပြင်အဆင်တွေပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ GENTLE MONSTER Flagship Store တွေကိုလာရောက်သူတွေဖို့ မျက်မှန်တွေကို ခင်းကျင်းပြသထားသလို အရမ်းကို လက်ရာမြောက်တဲ့ အနုပညာဆန်တဲ့ (တစ်ခါတစ်လေ Modern Art ဆန်တဲ့) ရုပ်ထုတွေ၊ အခင်းအကျင်းတွေနဲ့ Installation တွေကိုပါကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။ တကယ့်ကို Art /Concept Exhibitation တစ်ခုကိုရောက်သွားသလို၊ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလို ခံစားရမှာပါ။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့သူရဲ့ Collection တွေနဲ့ Collaboration တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်ဒီဇိုင်နာတွေ၊ Fashion Brand တွေ၊ Celebrity တွေနဲ့လည်း အရမ်းမိုက်တဲ့ Exclusive Collaboration တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာ Alexandar Wang နဲ့အတူ “M.PRI$$” လို့ခေါ်တဲ့ Gentle Monster x Alexander Wang Collection ကို Wang ရဲ့ 2019 FW New York Fashion Week မှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ရှင် Brand ကြီး Fendi နဲ့လည်း အမိုက်စား GENTLE FENDI Collection ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပြီးသလို British Actress Tilda Swinton နဲ့လည်း Tilda Swinton x Gentle Monster, Capsule Collection လည်းရှိသေးတယ်နော်။
“M.PRI$$” Gentle Monster x Alexander Wang Collection
GENTLE FENDI Collection
Tilda Swinton x Gentle Monster Collection
“Jentle Home” Jennie x Gentle Monster Collection
အခုနောက်ဆုံး Collaboration အနေနဲ့ကတော့ BLACKPINK Star လေး Jennie နဲ့ “Jentle Home” Collection ပါ။ Jennie ကဒီ Campaign ကို Photographer Hugo Comte နဲ့ရိုက်ကူးထားပြီး Edgy ဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ Style ကို မျက်မှန်တွေနဲ့ ဖော်ပြထားတာအရမ်းမိုက်ပါတယ်။ Collection ကိုလည်း “Jentle Home” လို့ပေးဖြစ်တာက Collection ကို Jennieရဲ့ ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေနဲ့ သူမအရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ Teddy Bear အရုပ်လေးတွေ၊ Dollhouse တွေနဲ့ အိမ်မက်ဆန်ဆန်ကမ္ဘာလေးကို Inspire လုပ်ထားတာကြောင့်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကဲ..ဒီလို ဆန်းသစ်တဲ့ Idea တွေနဲ့ Collection အသစ်တွေအမြဲထွက်ရှိနေတဲ့ GENTLE MONSTER ကို သင်ရော လိုချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီလား…။
Photo crd. Gentle Monster Website and original uploaders
နာမည်ကျော် Brand ကြီးနှစ်ခုရဲ့ ပေါင်းစပ်မှူ Supreme x Lamborghini Collection
Spring 2020 အတွက် ထွက်ရှိလာ‌တဲ့ ဒီ Collaboration ကတော့ တကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်
ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် အခုလတ်တလောမှာ အထူးခြားဆုံး Collaboration အနေနဲ့ Lamborghini နဲ့ Supreme တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှူကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ NewYork ရဲ့ Streetwear brandဖြစ်တဲ့ Supreme က Spring 2020 collection အနေနဲ့ Lamborghini နဲ့အတူ Collab လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော် Luxury Automobile brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Lamborghini" နဲ့ ကမ္ဘာကျော် Streetwear brand "Supreme" တို့ရဲ့Collaboration ကို စိတ်၀င်တစားစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသူတွေလည်းမနည်းသလို ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်း Qualityပိုင်းအရ အတော်လေးအားရစရာကောင်းတာကိုတွေ့ရှိရမှာပါ။
ဒီ Collaboration ကို April (2) ရက်နေ့ကစတင်၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အရောင်အားဖြင့် Lamborghini ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ Lime green,Neon Orange နဲ့ Black and Gold ကာလာတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်ထားပြီး တီရှပ် ၊ရှပ်လက်တို၊Hooded work jacket၊ Hockey Jersey နဲ့ Jumpsuit လိုပုံစံမျိုးတွေအထိ ပါ၀င်တဲ့အပြင် ခေါင်းစွပ်ဦးထုပ်နဲ့ Skateboard လိုမျိုး accessoriesတွေပါ ထွက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ နာမည်ကျော်brand နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှူတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရပေမယ့် Lamborghini ရဲ့ Crest Logo ပြူးပြူးပြဲပြဲကြီးတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာကတော့ နည်းနည်းကြည့်ရဆိုးတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
Supreme ဟာ အခြားသော နာမည်ကျော် brand များစွာနဲ့လည်း collaboration လုပ်ခဲ့ပြီး Supreme x Louis Vuitton မှာတော့ တော်တော်လေး hit ဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဒီတစ်ခေါက် Collaboration မှာရော လူကြိုက်များမှူရှိမရှိကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ လတ်တလော Covid-19 ကြောင့် Supreme ရဲ့ အမေရိကန် ၊အင်္ဂလန် နဲ့ ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ Store တွေအားလုံး ပိတ်ထားရတာကြောင့် ဒီ Collectionကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ online ကနေပဲ မှာယူလို့ရဦးမယ်လို့သိရပါတယ်။
#Hooded Work Jacket